ဆာဗားနားမြက်ခင်းပြင် - ဝီကီပီးဒီးယား
အာကေးရှား ဆာဗားနား၊ ဘာကီးနားဖားဆိုနိုင်ငံ
မြောက်ဩစတေးလျရှိ မုတ်သုံ ဆာဗားနားမြက်ခင်းတစ်ခု။ သစ်ပင်ထူထပ်မှု များပြားပြီး သစ်ပင်များ အချင်းချင်း အကွာအဝေးတူညီသော လက္ခဏာရှိသည်။
ဆာဗာနား မြက်ခင်းပြင် (Savanna သို့ Savannah) ဆိုသည်မှာ မြက်ခင်းပြင် ဂေဟစနစ် တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး အရိပ်များ နီးကပ် မနေရန် သစ်ပင်များသည် သေးငယ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြန့်ကျဲနေခြင်းစသည့် လက္ခဏာများ ရှိသည်။ အရိပ်များ နီးကပ်မနေခြင်းကြောင့် လုံလောက်သော အလင်းရောင်သည် မြေပြင်ပေါ်သို့ ရောက်ရှိနိုင်ပြီး စီ-၄ မြက်ပင်များ အဓိက ပါဝင်သော ခြုံပုတ်များကို ကြီးထွားစေရန် အထောက်အပံ့ပေးသည်။
အများအားဖြင့် ဆာဗာနား မြက်ခင်းဆိုသည်မှာ သစ်ပင်များ ကြားရှိ အကွာအဝေး ကျယ်ပြန့်သော ကျဲပြန့်နေသော ဒေသဟု ယုံကြည်ကြသည်။ သို့သော်လည်း ဆာဗားနား မြက်ခင်းပြင် အများစုတွင် သစ်ပင်တို့၏ သိပ်သမ်းမှု များပြားပြီး သစ်ပင်များသည် သစ်တောနှင့် စာလျှင် ပို၍ အကွာအဝေးတူညီကြသည်။ ဆာဗားနားမြက်ခင်းပြင်များတွင် မိုးရေရရှိနိုင်မှု ရှိတတ်ပြီး အများအားဖြင့် မိုးရေသည် ရာသီဥတု တစ်ခုတွင်သာ ရရှိလေ့ ရှိသည်။ ဆာဗားနားသည် ဘိုင်အုမ်း အချို့ဖြင့် ဆက်စပ်နေလေ့ ရှိသည်။ အများအားဖြင့် ဆာဗားနား မြက်ခင်းပြင်များသည် သစ်တောများ နှင့် ကန္တာရ သို့မဟုတ် ပရေရီမြက်ခင်းများ ကြားတွင် ရှိတတ်သည်။ ဆာဗားနားမြက်ခင်းပြင်များသည် ကမ္ဘာ့မြေမျက်နှာပြင်၏ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း ရှိပြီး အကြီးဆုံး ဆာဗားနားမှာ အာဖရိကတွင် ရှိသည်။
↑ Manoel Cláudio da Silva Jánior, Christopher William Fagg, Maria Cristina Felfili, Paulo Ernane Nogueira, Alba Valéria Rezende, and Jeanine Maria Felfili 2006 “Chapter 4. Phytogeography of Cerrado Sensu Stricto and Land System Zoning in Central Brazil” in “Neotropical Savannas and Seasonally Dry Forests: Plant Diversity, Biogeography, and Conservation” R. Toby Pennington, James A. Ratter (eds) 2006 CRC Press
↑ Abdullahi Jibrin 2013 “A Study of Variation in Physiognomic Characteristics of Guinea Savanna Vegetation” Environment and Natural Resources Research 3:2
↑ Erika L. Geiger, Sybil G. Gotsch, Gabriel Damasco, M. Haridasan, Augusto C. Franco & William A. Hoffmann 2011 “Distinct roles of savanna and forest tree species in regeneration under fire suppression inaBrazilian savanna” Journal of Vegetation Science 22
↑ Scholz, Fabian G.; Bucci, Sandra J.; Goldstein, Guillermo; Meinzer, Frederick C.; Franco, Augusto C.; Salazar, Ana. 2008 “Plant- and stand-level variation in biophysical and physiological traits along tree density gradients in the Cerrado”, Brazilian Journal of Plant Physiology
↑ "Determinants of woody cover in African savannas" (in En) (December 2005). Nature 438 (7069): 846–849. doi:10.1038/nature04070. ISSN 0028-0836. PMID 16341012. Bibcode: 2005Natur.438..846S.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဆာဗားနားမြက်ခင်းပြင်&oldid=682952" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၁ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၆:၃၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။